मेलम्चीको बाढीले बगायो ३५ अर्बको लगानी - Mero Mechinagar
आयोजनाको सुरुका अध्ययनले नै यसलाई अत्यन्तै समस्याग्रस्त स्थानका रूपमा देखाएको भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहाल बताउँछन्।
‘हाम्रो अनुमानभन्दा बाहिरको बाढी थियो’
रेसिडेन्ट इन्जिनियर, मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थलमा के भएर यति धेरै क्षति पुग्यो ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स भएको ठाउँभन्दा निकै माथिको क्षेत्रबाट धेरै ठूलो ‘ल्यान्डमास’ गएकोे अनुमान छ। हेडवर्क्सभन्दा माथिको साइट भीमाथानको वास्तविक अवस्था के हो भनेर कसैले गएर हेरेको र मूल्यांकन गरेको छैन।
बाढी आउँदाको अवस्थामा तपाईं साइटमै हुनुहुन्थ्यो। कसरी सुरक्षित रहनुभयो ?
टनेलमा भएको पानी खाली गर्ने (डिवाटरिङ) काम त्यसै दिन सुरु भएको थियो। धेरै पानी एकैपटक पठाउन नमिल्ने हुनाले २५० वा २६० लिटर प्रतिसेकेन्ड पठाइरहेका थियौं। बाढीको कुरा गर्दा हेडवर्क्सबाट हामी बस्ने क्याम्पसम्मका क्षेत्रका सबै फोटो र भिडियो खिचेर हेर्दा पानीको सतह अलिक अस्वाभाविक हो कि भन्ने लागेको थियो। झन्डै ६ः४० देखि ७ः१५ सम्म फोटोहरू खिचेर त्यसलाई कसरी खाली गर्न सकिन्छ भनेर लागेका थियौं। त्यो गर्दागर्दै करिब ७ः२३ बजेतिर सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प क्षेत्रमै रहेको एउटा एस्काभेटर झर्‍यो। अब खोलाको सतह पनि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले यहाँ बस्नु ठीक छैन भनेर हामी १०–२० मिटर बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्दागर्दै बाढीसहितको यति ठूलो छाल आयो कि त्यो हाम्रो अनुमानभन्दा बाहिरको थियो। हामी त्यहाँ ५०–५५ जना थियौं होला। हामी सबैले माथि डाँडातिर भागेर ज्यान जोगायौं। हामी पनि मुस्किलले १–२ मिनेटको अन्तरले मात्र बाँचेका थियौं। तर, वास्तविक रूपमा यत्रो ठूलो बाढी कसरी आयो भन्ने पत्ता लागिसकेको छैन। भौगोलिक विकटताले गर्दा मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्रमा गएर अध्ययन गर्न नसकिएको अवस्था छ।
अर्बौं लगानी हुने आयोजना बनाउँदा यस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउँछन् भनेर अध्ययन गरिएकै होला नि ?
प्रोजेक्ट बनाउनुअघि अध्ययन गरिएकै हुन्छ। तर, मैले रिपोर्टहरू हेर्दा यति ठूलो मास मुभमेन्ट हुन सक्छ होला भन्ने कतै देखेको छैन। यो अध्ययन गरेको भनेको आजभन्दा झन्डै ३०–३५ वर्षअघि हो। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि पनि त्यति गहिराइमा सरोकारवाला निकायबाट अध्ययन भएजस्तो लाग्दैन।
यति ठूलो आयोजना सानै बाढीले बगाएर लग्यो रे भन्ने सुन्दा सर्वसाधारणलाई त अचम्मै लाग्छ होला होइन ?
यो एकदम सही हो। तर, यहाँको बाढी सामान्य खालको बाढी थिएन। कसैको पनि अनुमानभन्दा बाहिरको थियो।
काठमाडौंमा पानी वितरणलाई निरन्तरता दिन अबको कदम के हुनेछ ?
कसरी हुन्छ यसलाई छिटो निरन्तर गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। हामीले बाढीपछि पनि चारपटक त फिल्ड भिजिट गरिसक्यौं। पहुँचमार्ग कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा कति शुल्क लाग्छ भन्ने अध्ययन गर्‍यौं। वर्षापछि पानीको सतह अलि कम भएपछि झन्डै ५–६ महिनासम्ममा निरन्तरता दिने लक्ष्य छ। टनेलमा कुनै क्षति पुगेको छैन भन्ने नै छ।